Saafi Films - News: DAAWO Booliis si arxandaro ah dadka xarig & dil iskugu dari jiray oo iyagii qudhooda Xabsiga lagu guray
DAAWO Booliis si arxandaro ah dadka xarig & dil iskugu dari jiray oo iyagii qudhooda Xabsiga lagu guray
8 ka tirsan ciidamada Booliiska dalka South Africa ayaa Xabsiga la dhigay ka dib markii ay ku kaceen fal aad u xun oo Caalamka oo idil ka qeeyliyay. Ragaan ayaa waxaa laga duubay muuqaal Video Sir ah iyaga oo Nafta kaga jaray kuna jiiday qaarka dambe ee gaari ay wateen Wiil u dhashay dalka Musaambiik.
Booliiskaan naxariista daran oo iminka Xabsiga lagu guray waxaa loo heeystaa oo ay dileen Wiil Taksiile ah oo 27 jir ahaa kaas oo diiday in uu raaco xili ay doonayeen inay xoog ku kaxeeystaan . Ciidamadaan Booliiska ah ayaa wiilkii waxa ay ku katiinadeeyeen gaari ay wateen qaarkiisa dambe kuwaas oo dhulka si naxariisdaro ah ugu jiiday.
Raga Booliiska ah ee loo heesta Dilka arxandarada ah ee Wiilkaan loo geestay ayaa lagu wadaa maalinta Isniinta in la soo taago Maxkamad maadaama la haayo Video cadeeyn ah xiligii ay ku kacayeen falkaan Hooyada dhashay wiilkaan iyo dhamaan qooyska uu ka soo jeeday ayaa wali waxa ay ku jiraan baroor. Xabsiyada dalka South Africa waxaa sanad kasta ku geeriyoodo dad lagu qiyaasay isku dar 1200 oo Qof. nasro on March 04 2013 ·
4,529,037 unique visits